Faroole oo ku guul dareystay Qorshe uu damacsanaa (Muxuu yahay) | Anti-Tribalism
← “Dawladda waxaa soo gala Qarash ku magacaaban Sugidda Amniga”
Faroole oo ku guul dareystay Qorshe uu damacsanaa (Muxuu yahay)
April 8, 2012 – C/raxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa ku guul darestay qorshe uu ku doonayay in Hay,adaha Dowlada Turkiga ay ugu wareegi lahayeen Deeganada Maamul goboleedka Puntland.
C/raxmaan Faroole ayaa dhawaantaan waxa uu kula kulmay Magalada Garoowe ee Xarunta Mamulkisa Puntland Safirka Soomaaliya u fadhiya dalka Turkiga Dr. kani torum kaaso uu kala hadlay arimo dhowr ah oo maamulkisa quseeya.
Safiirka Turkiga u jooga Dalka Somaliya Dr. kani torum ayaa Faroole sitoos ah uga codsaday in Hay,adaha Gargarka ay Dowlada Turkiga Xafiisyadeeda Muqdisho uu usoo raro Magalada Garoowe taas uu ka biyo diiday Danjire Dr. kani torum.
C/raxmaan Faroole ayaa marka uu ku gacan seyray Codsigiisa waxa uu bilaway inuu la kaashado R/wasaaraha Soomaaliya sidii Hay,adaha Dowlada Turkiga ee howlaha horumarinta kawada Magalada Muqdisho usoo guraan Puntland si deeqaha waxbarasho iyo mashaariicda horumarinta ay gacanta u gasho mamulka Puntland ayuu yiri Faroole.
C/wali Gaas R/wasaaraha Soomaaliya ayaa arintaa waxa uu ka yiri masuurto galeyso in hay,adaha dhamantod an soo warejino balse waxaan isku dayaa sidii xafisyo kale ay uga furi lahed dowlada turkiga ayuu yiri Mr. C/weli Gaas.
C/raxmaan Faroole ayaa isaga waxa uu doonaya in uu la qeybsado Dowlada Kumeel gaarka adeegyada ay ka hesho dowladaha deeqda bixiya kaas oo mar waliba amaro xoogan iyo isku dayo aan awoodiisa garsisneen ku dhaqaaqa.